WAQTIGEE HEERKULKA IYO INTEE IN LE'EG AYAA TUFAAXA LA QALAJIYAA QALAJIYAHA KORONTADA? - WIXII MARTIDA
Sida loo qalajiyo tufaaxa qalajiyaha mashiinka korantada: waqtiga, heerkulka, cuntada sida cuntada
Laga soo bilaabo qaababka jira ee tufaax goosashada ugu fudud waa isticmaalka qallajiye khaas ah. Jidka dhexdiisa, hawo nadiif ah si ay u diyaariso tufaaxa had iyo jeer ma ogolaato xaaladaha cimilada, iyo foornada mararka qaarkood way xad-dhaafaan.
Markaa, qalab khaas ah ayaa u oggolaanaya si loo xakameeyo karti-xirfadeed heerkulka, iyo habka oo dhan. Intaas waxaa dheer, xaddiga qallajiyayaasha casriga ah ee la goosto markasta waa mid soo jiidasho leh.
Haddii uu jiro faa'iidooyinka Habkani waa mid la fahmi karo, ka dibna waxaa lagama maarmaan ah in lafaguro faahfaahinta qaar ka mid ah faahfaahin dheeraad
Siyaabo badan, tayada tufaaxa la goostay waxay ku xiran tahay diyaarinta tufaaxa. Marka la eego, waxay faa'iido leedahay in la akhriyo maqaal ku saabsan diyaarinta tufaax ka hor inta aan la qalajiyo, halka ay suurtagal tahay in la ogaado sida si sax ah u goyn Mirahaas iyo faahfaahin kale.
Waxaa jira noocyo kala duwan oo ku saabsan joogitaanka ama maqnaanshaha maqaarka habka qalajinta.
Dhab ahaan, wax farqi ah kama helin halkan oo ka tago ama nadiifin maqaarka waxay kuxirantahay adiga mudnaanta shakhsi ahaaneed.
Inkasta oo diirka uu leeyahay waxyaabo badan oo waxtar leh, caarad iyo tufaax la mid ah. waxaa lagu talinayaa in la nadiifiyo.
Qallajinta tufaaxa qalajiyaha korontada ma muujin la'aanta qoyaan la'aan. Waa inay keliya sameeyaan inta ugu yar ee qoyaanka, sidaa daraadeed geeddi-socodkii burburkii ma uusan dhicin, laakiin qaybaha waxtarka leh ayaa weli ah. Si tufaaxa qallalan ee qalalan ma ahan mid jajaban, laakiin foorarsiga, iyo marka qoyaanka qoyan ee dusha sare aan dhaqmin.
Isticmaalida qalajiyaha korantada waqti kadib aad u fudud, maaddaama ay caddaato sida tufaaxa badani ay u jajaban yihiin santuuq kasta, inta jeer ee ay bedesho meesha ay ku taal, inta ay suurtagal tahay in la soo raaciyo. Guud ahaan, laguma talin karo inaad bixiso talooyinka guud ee halkan, maadaama qalabku uu ku kala duwan yahay dhinacyo badan.
Talo macquul ah waa in la tixgeliyo oo keliya tiirarka aasaasiga ah iyo isticmaalka waayo-aragnimo isku dhafan mustaqbalka.
Sidee loo qalajiyaa tufaaxa qalajiyaha miraha? Guud ahaan, jarjaran oo habeyn hab gaar ah ma aha mid adag. Intaa waxaa dheer, dad badan aaladaha waxay leeyihiin tilmaamo miro ama wax ka badan oo sax ah, oo ay ku jiraan tufaaxa. Halkan, waxay u egtahay, mid waa inaanu wax ku dari karin, laakiin si kastaba ha ahaatee wuxuu faa'iido u leeyahay inuu tixgeliyo dhinacyo gaar ah.
Waqti intee le'eg ayaad ku qallajineysaa tufaaxa qalajiyaha? Isku day in aad isbedesho wakhtiyada ugu dheer inta u dhaxaysa 11-da galabnimo iyo 7-da subaxnimo, tan iyo muddadan qiimaha korontada waa ka raqiisan yahay.
Guud ahaan, mudada heerkulka saxda ah waa ilaa siddeed saacadood, laakiin lagama maarmaan in la ilaaliyo muddadaas oo aan kala go 'lahayn oo geedi socodka way kala duwanaan kartaa haddii aad dhigato, tusaale ahaan, qaybo cusub ama aad bedesho meesha ay ku yaallaan santuukha.
Sidaa awgeed, muddada loo cayimay waxaa loo isticmaali karaa sida calaamaddalaakiin maaha sida xuduudaha ugu muhiimsan.
Xajmiga kala duwan ee kala duwan, kala duwanaanshaha noocyada, cabbirka suufka, heerkulka dejinta, meesha tufaaxa iyo lambarkooda qalajiyaha - kuwan iyo xaddooyin badan oo kale ayaa saameeya mudada ugu habboon.
Kuwa ugu macquulsan waa habka ugu habboon ee qaabka iyo heerkulka iyo qalajinta ilaa diyaar, taas oo lagu go'aamiyo aniga naftaydaoo aan waqti ku jirin.
Maxay tahay heerkulka qalajinta tufaaxa qalajiyaha korontada? Haddii qalabku leeyahay awooda lagu dajinayo heerkul gaar ah, markaa waa in nidaamiyeyaashu la rakibo meel gudaha 70-75 heerka Celsius.
Dabcan, tufaaxu si dhakhso ah ayuu u qalajin karaa. 100-110 digrii (sida caadiga ah, heerkulka xaddidan ee qalajiyaha guryaha), laakiin saamaynta heerkulkani ma aha mid macquul ah, maadama qaar ka mid ah qaybaha waxtar leh ay ka soo bixi karaan qaybaha.
Ka dib oo dhan, heerkul ka badan 100 darajo waxaad dhab ahaan karkari kartaa tufaax, iyo at 70 digrii Waxay leedahay saameyn fudud, guud ahaan, sida qallajinta dabiiciga ah.
Markaa, heerkulka si aad u qallajiso tufaaxa qalajiyaha, waxaad dooraneysaa.
Sidee loo qalajiyaa tufaaxa qalabka korontada? Aalado badan ayaa leh awood u leh dejiya habka qalajinta. Meelo tufaax ah ayaa la sawiray ama midho iyo sharraxaad kasta oo la mid ah ayaa la bixiyaa. Iyada oo xulashadan, waa inaad isticmaashaa habka ugu fiican ee miro.
Ka dib markii la helo waayo-aragnimo gaar ah, xirfad ayaa u muuqata inay aqoonsantahay diyaar-garowga tufaaxa fudud. Marka ugu horeysa, waxaa fiican inaad waqti badan ku qaadatid go'aaminta diyaargarowga.
Intaa waxaa dheer, ma adagtahay in la fahmo si ka wanaagsan samee xoogaa qalalan oo iska hubi diyaargarowga marka la dhaafo, sababtoo ah marwalba waad ka qalajin kartaa, laakiin tufaaxa aadka u qalafsan ayaa adkaata in lagu kabo qoyaanka lagama maarmaanka ah.
A si fiican loo qalajiyey tufaax tufaax ah ma aha jaban. Dhab ahaan, tufaaxa qalajiyey baaxad ahaanoo waxay kaliya u madoobaan.
Dheeraad ah miro waa in aysan aheyn, sida ugu dhaqsaha badan ay bilaabeen in ay hoos u dhigaan waxoogaa yar oo si weyn u yaraaday size, waxaad u baahan tahay inaad hubiso diyaargarow.
Qoyaanka aan la sii deynin gogolka la qalajiyey, laakiin jidhku waa uu joogaa waxaana uu leeyahay caraf udgoon oo tufaax ah, cadaan. Dusha sare waa madow iyo waxoogaa yaraaday.
Waxaad ku ogaan kartaa sida loo isticmaalo qalajiyaha korantada si aad u sameyso miraha qalalan ee tufaaxada laga soo qaaday fiidiyowga:
Si kooban u sharxi taxanaha falalka foomka qashinka qalalan:
Tufaax dhaqi oo jarjar (Wixi faahfaahin dheeraad ah, fiiri maqaalada ku saabsan diyaarinta qalajinta) iyadoo la isticmaalayo semi-shellfish ama xaleef.
Dhar gogol xaashida saxarada, si adag u xir, laakiin sidaas oo kale in aanad ku dhajin midka kale.
Buuxi suufyada iyo u dhig qalajiyaha, dhigay habka iyo saacadda heerkulkahaddii uu jiro mid.
Wakhti ahaan waxaan u wareegeynaa dabaqyada (sare oo ka hooseeya) oo ah qalajiyo badan oo la isku qurxiyo oo calaamadee tufaaxa.
Ugu dambeyntii, waxaan soo saarnaa tufaaxa kaas oo, marka la cadaadiyo, maraq dheeraad ah la sii daayo, ha u diyaari yar yar oo u wareeg weelka dhalada ama bacda dharka dabiiciga ah.
Alaabta la kariyey waa inay ahaataa godad ama qayb kale oo guriga ka mid ah. qabow (laakiin ma qabow) iyo qalalaniyada oo aan lahayn iftiin, kulayl badan iyo waxyaabo la mid ah.
Tani, qodobkeena "Sida loo xafidayo tufaaxa qalajinta si aan barkoodu u bilaabin iyaga: fursadaha difaaca" ayaa soo galaya.
Karsado iyadoo la isticmaalayo tufaaxa talooyinka kor ku xusan, waxaa lagu keydin karaa dhowr sano. Inkastoo mararka qaarkood ay been u sheegi karaan hadba siday u kala duwan yihiin xaaladaha iyo xaaladaha. Sida caadiga ah, muddada labada sano ah waa wax aad u fiican oo loo sameeyo tayada goosashada. Sida loo kaydiyo tufaaxa guriga, aqriso boggeena.
Qalabka korantada ee ku saabsan arrintani waa qalab waxtar leh, maadaama ay u ogolaato ugu yaraan waqti iyo tufaax goos goos ah oo aad u badan.
Ka dib markii laba ka mid ah tufaaxa qalajinta madaxbannaan ee korantada korantada u muuqata xirfad ku habboon iyo geeddi-socodka ayaa loo-qaabeeyay.
Waxaad samayn kartaa tiro go'an oo tijaabo ah heerar kala duwan iyo waqtiyo kala duwan si loo go'aamiyo doorashada ugu fiican.
Sida loo qalajiyo shan kiilogaraam oo tufaax ah jiilaalka qalajiyaha, waxaad ku baran doontaa adigoo daawanaya fiidyowgan:
Waa maxay sababta bakayle u leeyahay indho-biyood
Waxaannu korinaynaa xayawaanka ku jira kiniisad
Miyaad xirtaa canabki hore ee xagaaga xagaaga? Fiiri "Beauty", waxay leedahay isku-dhafka wanaagsan ee sonkorta iyo asaasiga macaan, iyo dhadhanka waa fiican! Canab "Pretty Woman" Caleemaha "Pretty Woman" ayaa waxaa loo weeciyay qoryo caan ah Yevgeny Pavlovsky. Canabkani wuxuu ka mid yahay noocyada hiwaayadda, maadaama aan noocyo kala duwan loo isticmaalin in lagu shubo, laakiin foomamka miro. Read More
Salad dhadhan iyo saliideed leh Kaabashka Shiidan, gawaarida iyo rummaanka iyo waxyaabo kale